Inona ny lalaovina? & Ndash; Khachaturyan Nataliya, Expert Experts, dia manazava ny fomba hanatsarana ny votoatiny ho an'ny tanjona SEO
Inona ny lalaovina? - Khachaturyan Nataliya, Expert Experts, dia manazava ny fomba hanatsarana ny votoatiny ho an'ny tanjona SEO
Ny dingana manaraka dia ny dingan'ny fanoratana lahatsoratra mba hamoronana dika voaloham-bokatra sy mba hialana amin'ireo olana mifandraika amin'ny votoaty izay mety hiteraka sazy avy amin'ny Google, Bing, ary Yahoo. Ny hevitra dia ny manoratra lahatsoratra iray ary mamorona tampony an-jatony an'arivony. Ny dikan-teny samihafa ao amin'io lahatsoratra io na ny vohikala amin'ny tranonkala dia midika hoe lahatsoratra miloko. Ankoatra izany, mpanoratra iray izay manoratra lahatsoratra iray dia tompon'andraikitra amin'ny fampidirana ireo rohy miverimberina ao amin'ny pejin-tranonkala voalohany ao anaty lahatsoratra. Ireo rohy rehetra ireo dia mampahalala an'i Google fa malaza io tranonkala manokana io ary hanosika ny sari-fikarohana hanatsara ny toerany.
Azonao atao ny mamorona mora foana lahatsoratra, saingy ny kalitaony dia tsy mahatratra ny marika. Araka ny fantatrao, mitaky fotoana be hanamboarana votoaty tena izy izany, nefa tena hanampy anao hanatsara ny fisainan'ny tranokalanao izany. Raha ny marina, ny votoatin'ny votoaty dia ny dikan'ny hatsikana SEO amin'ny lahatsoratra. Khachaturyan Nataliya, Semalt Strategy Content, dia milaza fa ny olana dia tsy misy fomba azo anoaran-dàlana hamongorana ireo lahatsoratra.
Nahoana no manimba ny lahatsoratrao ny tranokala
Tsara ny manamarika fa ny marketing ara-barotra no fomba malaza sy azo antoka amin'ny fivarotana ireo vokatrao, hevitra ary serivisy ao amin'ny aterineto. Ny pejin'ny lahatsoratra dia nosoloina isan'andro, ary maro ny fandaharana fandaharana sy rindrambaiko dia tsy afaka manampy amin'ny famoronana dika mitovy ny votoatiny..Matetika ny lahatsoratra dia nosoloina tanjona ara-barotra ary noho ny famoronana rakitra ho an'ity tranonkala ity .
Google dia tia votoaty vaovao
Mikaroka voka-pikarohana vaovao sy manan-danja ny milina fikarohana. Bilaogy sy vohikala izay mamoaka lahatsoratra tsy tapaka matetika no avoaka kokoa amin'ny valin'ny fikarohana noho ireo tranokala sy bilaogy izay tsy miraharaha ny famoahana lahatsoratra voalohany.
Ny fitaovam-pandrafetana rehetra sy ny rindrambaiko rehetra dia mamorona ny dikan-teny tsy hay vakiana
Tsy afaka hiantehitra amin'ny fitaovana maoderina na rindrambaiko ianao satria izy ireo dia mamoaka lahatsoratra tsy misy lanjany sy tsy azo havaozina. Raha mampiasa rindrambaiko miloko ianao, dia tokony ho azonao antoka fa ny votoaty dia azo vakiana sy fenoina tsara amin'ny tanjona SEO. Mampalahelo fa tsy azo itokisana ny fitaovam-pamokarana lahatsoratra ary manome kopia votoatiny izay sarotra vakiana.
Tsy mitovy ny teny sy ny andian-teny, ary ny hevitra sy ny hevitra dia mitovy
Amin'ny alalan'ny fitaovam-pandrafetana lahatsoratra, dia afaka mamorona dika mitovy amin'ny votoaty iray ihany ianao, fa ny kalitao dia tsy mahatratra ny marika. Tsy mitovy ny teny sy ny andian-teny, nefa ny hevi-dehibe sy ny hevitra dia mitovy foana. Midika izany fa ny rindrankajy fanoratana lahatsoratra dia hamoaka dikan-teny marevaka ihany ary tsy afaka miantehitra amin'ny fandaharan'asa toy izany ianao fa tsy hanampy anao hanatsara ny isa misy anao.
Tsy misy dikany ny filalaovana
Mino ny webmaster sy ny mpitoraka blaogy fa ny fandefasana lahatsoratra tsy misy dikany ary tsy tokony ho anisan'ny fiainantsika. Raha tsapanao fa ny maha-zava-dehibe ny votoatiny tokana sy tena izy, dia tsy te hiverina hitety ny lahatsoratrao ianao. Ny dika mitovy dika mitovy amin'ny votoaty iray ihany dia mety hiteraka olana ho an'ny tranonkalanao sy ireo webmasters hafa, ary izany no antony itondran'io fanao io ho tsy mendrika sy tsy mendrika Source .